Oral Turinabol (Oral Tbol) ntụ ntụ (2446-23-3) ≥98% | AASraw ntụ ntụ
/ ngwaahịa / ndị ọzọ na- / Oral Turinabol (Oral Tbol) ntụ ntụ
SKU: 2446-23-3. Category: ndị ọzọ na-
AASraw nwere ikikere na mmepụta site na gram ka usoro nchịkwa nke Oral Turinabol (Oral Tbol) powder (2446-23-3), n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkọta mma.
Oral Turinabol (Oral Tbol) ntụ ntụ isi agwa
aha: Oral Turinabol (Oral Tbol) ntụ ntụ
agba: Gbanyụọ ọcha ntụ ntụ
Oral Turinabol (Oral Tbol) uzuzu eji eme ihe na steroid
Oral Tbol ntụ ntụ (Oral Turinabol ntụ ntụ) Aha
Oral Turinabol ntụ ntụ na-akpọ Oral Tbol ntụ ntụ (CAS 2446-23-3), OT, wdg.
Oral Tbol ntụ ntụ (Oral Turinabol ntụ ntụ) Ugboro
Oral turinabol bụ ọtụtụ oral ojiji. Maka nwoke, na-emekarị 15mg-40mg n'ụbọchị, ọ bụghị karịa 8 izu; Maka nwanyị, na-emekarị 2.5-5mg kwa ụbọchị, ọ bụghị karịa 6 izu.
E mepụtara T-BOL na-eso danabol. Oral t bol na-enye ohere nnukwu mmepe na-enweghị ebigide mmiri dị ka danabol. Ihe ọ na-eme bụ ntakịrị nwayọ kama uru ndị ahụ nwere. Nkwadebe anabolic a pụrụ iche iji kpalite mmepụta ihe nke sitere na testosterone, eziokwu ahụ bụ na onye ọrụ na njedebe ọgwụgwọ nwere ọnụ ọgụgụ dị elu nke mgwakota agwa. Ọ dị mma iji nọgide na-azụlite ahụ ike ya ogologo oge.
Chlorodehydromethyltestosterone, aha njirimara maka ihe a mara nke ọma bụ Oral Turinabol, bụ ihe pụrụ iche nke Dianabol. Nke a na-edozi steroid bụ obe n'etiti methandrostenolone na clostebol (4-chlorotestosterone), na-enwe otu ntọala dịka Dianabol na 4-chloro gbanwere nke clostebol. Ngbanwe a na-eme ka chlorodehydromethyltestosterone nwanne nne nke Dianabol, onye ọhụrụ steroid na-egosipụta enweghị estrogenic na ihe na-erughị androgenic arụ ọrụ iji tụnyere ya ibe ya mara amara. Anabolic ọrụ nke chlorodehydromethyltestosterone bụ dịtụ ala karịa nke Dianabol nakwa, ma ọ na-anọgide na-enwe ọtụtụ ihe ndị ọzọ kwesịrị ekwesị nke anabolic ka androgenic utịp. Nke a pụtara na na ọkwa ọ bụla a na-arụ ọrụ muscle, chlorodehydromethyltestosterone ga-abụ obere o yiri ka ọ na-emepụta mmetụta na-emepụta etrogenic.
Ejiji na Ụmụ nwoke
A na-emekarị ọgwụ Oral Turinabol ka ọ bụrụ 5 mg kwa ụbọchị; ezigbo ntuziaka na-edepụta iwu adịghịzi adị. N'ọgba egwuregwu, ụbụrụ dị irè kwa ụbọchị na-adabere na 15-40 mg, nke a na-ewere na oge ọkara karịa 6-8 izu iji belata yapatotoxicity. Nke a dị oke maka mmụba nke nwere ike ịdị na-adaba na ike ahụ na ike. A na-ejikarị ndị ọrụ a eme ihe dị ka ịlụ ọgụ ma ọ bụ ịkpụlata steroid maka nzube nke ahụ, ma a dịghị ele ya anya dịka onye na-elekọta ndị na-ekpo ọkụ na-ezighi ezi n'ihi enweghi estrogenicity. Ndị na-eme egwuregwu n'egwuregwu ebe ọsọ na-elekwasị anya na-achọsi ike na chlorodehydromethyltestosterone, na-enweta ezigbo uru anabolic n'enweghị ebugharị na mmiri ọ bụla ma ọ bụ abụba dị arọ.
Eji Ụmụ nwoke Na-eme Ihe
A na-ewere usoro ọgwụgwọ Oral Turinabol zuru oke ka ọ bụrụ 1-2.5 mg kwa ụbọchị; ezigbo ntuziaka na-edepụta iwu adịghịzi adị. N'ọgba egwuregwu, ụmụ nwanyị na-ewere otu mbadamba 5 mg naanị otu ụbọchị, na-ewere ya na oge na-adịghị anya karịa izu 4-6 iji belata yapatotoxicity. O yighị ka ọ ga-emetụta nsogbu ndị dị na ọkwa a. A na-ejikarị ọtụtụ usoro dị elu karịa ndị na-egwu egwuregwu nke nwanyi na usoro mmechi dopingị GDR, ma na-emekarị ka ọ ghara imetụta mmetụta ndị na-adịghị mma.
Ọkara ndụ na akwụkwọ sayensị na-esote nchịkwa IV bụ 16 awa; Otú ọ dị, ọkara ọkara nke ọnụ anaghị abụ otu1 ahụ. Otutu ọkara ndụ maka nchịkwa ọnụ bụ ogologo karịa nke nchịkwa nke anọ, Otú ọ dị, na nke a, ọ nwere ike bụrụ mkpụmkpụ n'ihi mbido metabolism mbụ ma belata ọkwa ọkwa plasma elu ma e jiri ya tụnyere IVXUMX IV. Akwụkwọ ọzọ na-egosi obere ọkara ndụ1. Ezi atụmatụ dị ma ọ dịkarịa ala awa asatọ maka ọkara ndụ nke steroid a ma eleghị anya ọ bụ ezigbo ihe dị n'etiti 2 na 12 awa. Eziokwu ahụ bụ na a pụrụ ịchọpụta metabolites nke steroid a ruo ogologo oge mgbe njedebe na-arụ ụka banyere ogologo ndụ ndụ20.
Ndị ọrụ ekwuwo ezigbo ike iwepụ nke mkpụrụ ndụ testosterone mgbe eji Oral Turinabol. Onye na-agwọ ọrịa a bụ ọnya imeju ma ọ ga-abụ na ọ dị ntakịrị karịa nsí karịa nha nke methandrostenolone. A maara onye na-arịa steroid a maka ọrụ ya na usoro nkwado dopedịpụ nke obodo nke mbụ na-eme egwuregwu mmemme Olympic. A na-enye ọgwụ ndị a na-eme egwuregwu na ndị nwoke na ndị nwanyị na-eme egwuregwu karịsịa iji mee ka egwuregwu na-eme egwuregwu asọmpi. Ọ bụ ezie na a na-emeso ụmụ nwoke, ndị inyom nọ na-elekwasị anya n'ihi na ha nabatara nke ọma karịa ọgwụgwọ. Nanị nke 10 na 20 mg kwa ụbọchị na-eme ka akara dị elu na arụmọrụ n'ime ụmụ nwanyị. Ihe omume a gụnyere ọgwụ ndị ọzọ dị ka mestanolone, ụdị 11-beta hydroxy nke Oral Turinabol, 4-chloro-methyltestosterone, 4-chloro-mestanolone, methandrostenolone, testosterone na estand nke nandrolone tinyere ụfọdụ stimulants na hormones peptide. Ọbụna nke ahụ, Oral Turinabol bụ ihe na-elekwasị anya n'ihi na ọ dị ka ọ na-akọ nsonaazụ kacha mma results4.
Oral Turinabol egosiwo na afọ ndị na-adịbeghị anya n'azụ azụ ndị mmadụ na-eji ihe karịrị 100 mg kwa ụbọchị. Na dose a, onye ga-eche ma ọ bụrụ na ngwaahịa ahụ nwere ezigbo steroid ma ọ bụ dị n'okpuru dosed ma ọ bụ ọ bụrụ na ọ bụ naanị ikpe ọzọ nke "ọzọ ka mma".
Ịdọ aka ná ntị na raw Oral Tbol powder (CAS 2446-23-3)
Mmetụta dị iche iche nke Oral Turinabol bụ ụfọdụ n'ime nwayọọest nke ọ bụla steroid steeti n'ụwa. Otú ọ dị, anyị ga-achọpụtakwa na o nwere ike inwe mmetụta siri ike, na-ezighị ezi na ahụike obi. Nke a kwesịrị ịdị na-edozi maka onye ahụ tozuru etozu mana ọ ga-abụ ihe ị chọrọ ilekwasị anya. Ndị ikom na ndị inyom ga-enwe ike iji steroid a.
Mmetụta Na-akpata (Androgenic)
Ọ bụ ezie na chlorodehydromethyltestosterone bụ nkewa dịka onye na-agwọ ọrịa anabolic, a na-enwekwa mmetụta ndị ọzọ na-eme ka androgenic nwee ihe a. Ndị a nwere ike ịgụnye ụba akpụkpọ anụ, akpụ, na ntutu ntutu ihu / ahụ. Ọdịdị dị elu karịa ka a na-edekarị ka ọ ga-esi mee ka mmetụta dị otú ahụ dị otú ahụ. Anabolic / androgenic steroid nwere ike ime ka di na nwunye mebie ntutu isi. A dọrọ ndị inyom aka ná ntị ọzọ banyere nsogbu ndị na-adịghị emerụ ahụ nke anabolic / androgenic steroid. Ndị a nwere ike ịgụnye mmụba nke ụda, ụda olu nke oge, mgbanwe nke ederede akpụkpọ ahụ, ntutu isi ihu, na ọnụ ọgụgụ ụlọ. Chlorodehydromethyltestosterone abụghị nke 5-alpha reductase enzyme na-ejikarị emetụta ya, n'ihi ya, ọ naghị agbanwe nnukwu mmekọrịta ya na finasteride ma ọ bụ dutasteride.
Mmetụta Mmetụta (Hepatotoxicity)
Chlorodehydromethyltestosterone bụ c17-alpha alkylated compound. Ngbanwe a na-egbochi ọgwụ ahụ site na mgbochi imeju site na imeju, na-ekwe ka ọnụ ọgụgụ dị elu nke ịṅụ ọgwụ na-abanye n'ọbara site na nchịkwa ọnụ. Ọrịa anabolic / androgenic nke C17-alpha nwere ike ịbụ hepatotoxic. Mgbatị dị ogologo ma ọ bụ elu nwere ike ịkpata mmebi imeju. N'ọnọdụ ndị na-adịghị adịkarị egwu ndụ nwere ike ịmalite. Ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịga leta onye dọkịta kwa oge n'oge usoro ọ bụla iji chọpụta ọrụ imeju na izu ike. A na-ejikarị izu ike XXUMUM-17 na-ebute ihe ndị na-akpata c6-alpha alkylated, na-agbalịrị izere imeju imeju imeju. A na - enye ndụmọdụ maka mgbatị mmeju umeji dịka Liver Stabil, Liv-8, ma ọ bụ Essentiale Forte ka ha na-ewere ọgwụ ọ bụla na-arịa ọrịa anabolic / androgenic.
Mmetụta Akuku (Obi)
Anabolic / androgenic steroid nwere ike inwe mmetụta nbibi na cholesterol ọbara. Nke a na-agụnye iji belata ọnọdụ HDL (ezigbo) na cholesterol ma mee ka ọnụ ọgụgụ cholesterol baawanye na LDL (nke ọjọọ), nke nwere ike ịgbanwegharịa HDL na LDL nguzozi nke na-eme ka ohere nke arteriosclerosis dịkwuo njọ. Mmetụta mmetụta nke anabolic / androgenic steroid na serum lipids dabeere na dose, ụzọ nke nlekọta (onu vs. injectable), ụdị steroid (aromatizable ma ọ bụ non aromatizable), na larịị nke iguzogide ọgwụ ndị na-agwọ ọrịa ọgwụ. Chlorodehydromethyltestosterone nwere mmetụta siri ike na nchịkwa ndị na-agwọ ọrịa cholesterol n'ihi ọdịdị ya na-adịghị na aromatiza, nguzogide na-eguzogide imeju imeju, na ụzọ nchịkwa. Anabolic / androgenic steroid nwere ike imetụta ọbara mgbali na triglycerides, belata ezumike nke endothelial, ma kwado ọbara hypertrophy nke fọdụrụ, ihe niile nwere ike ịbawanye ọrịa nke ọrịa obi obi na infarction myocardial.
Iji nyere aka belata mkpịsị ọbara ọ na-adụ ọdụ ka ọ nọgide na-enwe mmega ahụ mmega ahụ nke na-arụ ọrụ nke ọma ma belata oriri nke abụba jupụtara, cholesterol, na carbohydrates dị mfe n'oge niile n'oge nchịkwa AAS. Ntinye na mmanu ndi ozo (4 grams kwa ubochi) na cholesterol a na-acho acho / antioxidant formula dika Lipid Stabil ma obu ihe ndi ozo dika ihe ndi ozo.
Mmetụta Na-emetụta (Mgbochi Testosterone)
A na-atụ anya na ọgwụ niile anabolic / androgenic mgbe a na-eme ya iji kwado uru uru ahụ na-egbochi nrụpụta testosterone. Enweghị enyemaka nke ihe na-akpali akpali nke testostrone-stimulants, eto eto testosterone kwesịrị ịlaghachi n'ime ọnwa 1-4 maka ịṅụ ọgwụ ọjọọ. Rịba ama na hypogonadism hypogonadotrophic dị ogologo nwere ike ịmepụta nke abụọ iji ọgwụ ọjọọ eme ihe, ọ dị mkpa iji ọgwụgwọ mee ihe.
Oral Tbol ntụ ntụ ntụziaka ndị ọzọ
O doro anya na mmetụta Oral Turinabol ga-abụ ihe kasị baa uru nye onye na-eme egwuregwu na onye na-eme egwuregwu anyị pụtara n'ezie onye na-eme egwuregwu. Anyi ekwughi banyere aru ahu ma obu mgbatị ezumike nke na-adi ka otu ma kama onye n'egwuri egwu n'egwuregwu egwu. Oral Turinabol ga-eme ka nkwonkwo nke nkwonkwo kwalite ngwa ngwa, ha agaghị ada mbà ngwa ngwa, ọ ga-abụrịrị na a ghaghị ime ka mgbake ha gbanwee.
Oral Turinabol ntụ ntụ (CAS 2446-23-3)
Oral Tbol ntụ ntụ Marketing
Esi zụta Oral turinabol powder (CAS 2446-23-3); zụta Oral Tbol ntụ ntụ si AASraw
AASraw na-enye 99% dị ọcha Oral turinabol raw powder to bodybuilders ma ọ bụ n'okpuruala labs maka ojiji oral.
Oral turinabol Nri ntụ ntụ ntụziaka:
ORAL SUSPENSION (BỤ EZI GA-AGBA ỌZỌ)
1gram ntụ ntụ (winny, anavar, dbol, OT, wdg.)
Nri ụtọ 1ML
Mmiri mmiri distilled 43ML
omume ndi mmadu ga - ejide n 'ebe a:
2.5grams ntụ ntụ (winny, anavar, dbol, OT, wdg)